Yarra Council - Parking in Yarra Somali
You are here: Home > Services > Parking in Yarra Somali Print Page
Parking in Yarra Somali
Goobaha gaari dhigashada ee Yarra Parking in Yarra
Waxaa jira mararka qaarkood baabuur ka badan tira ahaan goobaha banaan ee baabuurta la dhigan karo ee ku yaalla Yarra. Degmadaani waa degma qadiima. Wadooyinka waxaa la dhisay sanadihii 1800 looma qoondayn baabuur ama in dadka guryaha degani dhigtaan in ka badan hal gaari.
Golaha degmadu wuxuu doonayaa inuu isku dayo sixida dhibta baabuurta iyo arrimaha la xiriira gaari dhigashada laakiin maaha iyada oo la dhisayo meella badan oo baabuurta la dhigto ama la weydiisanayo wadooyin tira badan. Muhiimada Goluhu waa wanaajinta iyo ilaalinta barta gaari dhigashada deganayaasha iyo ganacsiyada iyada oo lagu dhiirigelinayo in dad badani isticmaalida gaadiidka dadweynaha.
Golaha degmadu wuxuu leeyahay shan ogolaansho gaari dhigasho oo kala duwan:
• Meelaha la degan yahay (haddii aad ku nooshahay Yarra)
• Ganacsi (haddii aad ku leedahay ganacsi Yarra)
• Iin (haddii qabto iin ama daryeesho qof iin leh)
• Booqde (marka dad kuu yimaadaan oo ku soo booqdaan)
• Ku-meelgaar (marka aad u baahan tahay ogolaansho muddo gaaban)
Dadka ku nool Yarra waxaa loo ogol yahay ilaa saddex ogolaanshaha gaari dhigashada. Tusaale ahaan haddii aad ku nooshahay Yarra aadna leedahay laba gaari waxaad dalban kartaa laba ogolaansho guri iyo hal ogolaansho oo booqdaha.
Dadka ku nool guryaha apartments-ka ama units-ka ah oo la dhisay wixii ka dambeeyey Diseembar 2003 xaq uma laha ogolaanshaha gaari dhigashada. Fadlan ka hubi Golaha haddii aadan hubin xaq u yeelashada ogolaanshaha gaari dhigashada.
Ogolaanshahani wuxuu ku dhacaa 12 bilood wuxuuna kuu ogolaanaya inaad si sharci ah ku dhigato hal bed (sida gurigaaga agtiisa) iyada halkii sanaba lacag la bixinayo, ama lacag la’aan haddii aad dalbanayso ogolaanshaha iinta.
Ogolaanshahaaga gaari dhigashada wuxuu dusha ku yeellan doonaa nambar. Waxaa sharciyan laguu ogol yahay meesha lagu calaamadiyey isla nambarkaas (arag khariiidada bogga 2aad).
Haddii aad gaariga dhigato meel qalad ah waxaa laga yaabaa in lagu ganaaxo. Haddii lagu ganaaxo, waxaad haysataa 28 berri oo aad lacagta ku bixiso. Haddii aadan ku bixin 28 berri dhexdood talaabo kale oo sharci ah ayaa lagaa qaadayaa waxaa laga yaabaa inaad bixiso lacag siyaadiyo ah oo aad siiso golaha degmada. Haddii aad u malaynayso inaad haysato sabab fiican oo aad diidan tahay bixinta ganaaxa waxaad weydiisan kartaa Golaha in dib loo eego.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeegyada gaari dhigashada, lacagta la iska qaado iyo ganaaxa wac Golaha 9205 5255 ama booqo www.yarracity.vic.gov.au/services/parking. Waxaad kaloo la hadli kartaa qof afkaaga ku hadla adigoo wacaya adeega turjubaanka tel: 9280 1940. Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeega turjubaanka, fadlan wac 9280 1940 aweydiina qoraalka Yarralink ama booqo www.yarracity.vic.gov.au
Soonayaasha gaariga la dhigan karo
Telefoon: 9205 5555